Dagaal laga cabsi qabo in uu caawa ka dhaco Balcad. Ciidamo laga diray Madaxtooyada oo Balcad ku wajah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dagaal laga cabsi qabo in uu caawa ka dhaco Balcad. Ciidamo laga...
Dagaal laga cabsi qabo in uu caawa ka dhaco Balcad. Ciidamo laga diray Madaxtooyada oo Balcad ku wajah
Waxaa caawa Ciidamo ku dhow kun Askari oo katirsan Milateriga Soomaaliya oo wata gaadiidka dagaalka iyo hub culus ay ku wajahan yihiin degmada Balcad ee Gobalka Shabeelaha Dhexe, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil katirsan Milateriga Soomaaliya.
Ciidamadaan oo u badan kuwa dhowaan tababar loo soo xiray kana tirsan Guutada 14-ka October ayaa la sheegay in ay loo diray in Al-Shabaab ay ka saaraan degaano iyo degmooyin katirsan Gobalka Shabeelaha Dhexe, gaar ahaan degaanada ku dhow degmada Balcad iyo degmada Afgooye ee Gobalka Shabeelaha Hoose, gaar ahaan Basra iyo nawaaxigeeda.
Saraakiisha aan la hadalnay ayaa noo sheegay in Ciidankaan ay hogaaminayaan Saraakiil sare oo katirsan Madaxtooyada Soomaaliya iyo Wasaaradda Gaashaandhigga, waxayna sheegeen in ujeedkooda uu yahay in Al-Shabaab dalka laga saaro sida ugu dhaqsiayaha badan. Balse, warar aan ka helnay degmada Balcad aya sheegaya in ciidamo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo dhowaan gadoodka sameeyay kuna suga degmada Balcad iyo agagaarkeeda ay galeen heegan una diyaar garoobeen in ay iska caabiyaan ciidanka laga soo diray Madaxtooyada.
Xubno katirsan Guutada 14-ka Octoober ayaa MOL u sheegay in Caawa ay ku baxayaan Shabeelaha Dhexe, gaar ahaan aagga Balcad maalmo kadibna ay u jiheysan doonaan dhinaca Marka iyagoo maraya dhinaca Xeebta.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maalmo ka hor Wasaaradda Gaashaandhigga ka sheegay in dhowaan DF-ka Soomaaliya ay bilaabi doonto howlgalo dalka looga saarayo Al-shabaab, waxaana la sugayaa in dagaalka dhowana ka bilaawdo dagaalka ka dhan ah Al-Shabaab.WhatsApp Google+ Twitter Facebook